Soo ogow waxa aan ka arki karno magaalada Glasgow ee Scottish-ka | Bezzia
Maxaa lagu arkaa Glasgow
Susana Garcia | 21/04/2021 10:00 | nololeedka, safarka
La Magaalada Glasgow waa magaalo deked leh oo ku teedsan wabiga Clyde. Magaaladan Scottish-ka ah ee ku taal Lowland badiyaa maahan meel la booqdo marka lala barbardhigo Edinburgh, laakiin sidoo kale waxay qarisaa waxyaabo xiiso leh. Laga soo bilaabo qarnigii XNUMX-aad ilaa XNUMX-aad waxay ahayd magaalo aad u barwaaqo iyo wax soo saar badan, sidaa darteed waxay yeelatay koboc weyn. Maanta wali waan arki karnaa dhismaha Fiktooriya iyo Joorjiyaanka, iyo waliba meelo casri ah.
Aan aragno waxa ay yihiin dhibcaha xiisaha ee magaalada Glasgow, oo waliba ah booqasho xiiso leh. Waa booqasho weyn haddii aan joogno Edinburgh, maadaama ay timaaddo saacad ka hor. Waan awoodi doonnaa inaan aragno xarunteeda taariikhiga ah iyo aagga dekedda ee dib loo hagaajiyay ee webiga ku ag yaal, iyo waxyaabo kale.
1 Kaniisadda St Mungo
2 Matxafka Kelvingrove
3 Beerta dhirta Glasgow
4 Necropolis ee Glasgow
5 Ashton iyo Lane Hidden
6 Bartamaha magaalada Glasgow
Kaniisadda St Mungo
Tani Cathedral waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu da'da weyn uguna matalaada saxda ah qaabka Gothic gudaha Scotland. Waa cathedral la dhisay qarnigii XNUMXaad oo dib loo dayactiray qarnigii XNUMXaad. Waad booqan kartaa qabriga Saint Mungo oo ah ilaaliyaha magaalada oo ku yaal meel qarsoodi ah oo qarnigii XNUMXaad ah. Waxaad sidoo kale qaddarin kartaa daaqadaha muraayadda qurxoon ee qurxoon, in kastoo ay hadda yihiin, iyo saqafka qarnigii XNUMXaad. Kaniisad aad u qurux badan oo ka mid ah booqashooyinka lagama maarmaanka ah ee magaalada Glasgow.
Magaaladaan waxaa ku yaal matxafyo fara badan, in kasta oo kani yahay kan ay tahay inaad aragto oo aadan seegin haddii aadan haysan waqti badan oo aad ku wada aragto. Matxafkan waxaa ku wareegsan jardiinooyin qurux badan oo kaliya ma soo jiidan karo hareeraheeda, maadaama ay leedahay shaqooyin badan oo xiiso leh. Waxaan ku arki karnaa qolalkooda Boticelli's 'The Annunciation' ama Dalí ee 'Christ of Saint John of the Cross', iyo sidoo kale qaar ka mid ah sawirada Van Gogh ama Rembrandt.
Beerta dhirta Glasgow
Tani qurux badan Beerta dhirta waxay ku taalaa hal dhinac dhamaadka West End. Waa jardiin weyn oo dadweyne oo aad u qurux badan xilliyada sida guga iyo deyrta. Beertan waxaan ka helaynaa Kibble Palace, oo ah aqalka cagaaran ee Fiktooriya oo mudan in la booqdo. Meesha ugu fiican ee laga qaado sawiro qurux badan.
Necropolis ee Glasgow
Ku xigta Katidralka St Mungo waxaa jira necropolis qurux badan Glasgow. Edinburgh sidoo kale waad ku qadarin kartaa xabaalaha duugga ah ee quruxda badan, kuwaas oo runtii soo jiidasho gaar ah leh. Qabuurahani waxay ka yimaadeen xilligii Fiktooriya, markaa waxay leedahay faahfaahin badan oo naga yaabin doonta. Waad ku lugeyn kartaa socod aad u qushuucsan dhammaan faahfaahinta qabuuraha waxaadna aadi kartaa kaniisadda si aad kor uga aragto.
Ashton iyo Lane Hidden
Haddii aad wax ka maqasho haadka, waa cidhiidhi, waayeello luuq luuq leh oo aad ka heli karto jawiga ugu wanaagsan magaalada. Marka booqasho kale taas hubaal waxaad u baahan doontaa inaad sameyso waxaa ka mid ah Ashton iyo Hidden Hane. Ashton waxay ku taal degmada jaamacadda waxaan ka heli karnaa baararka iyo maqaayadaha leh jawi wanaagsan oo aan ku joogsanno. Qarsoon ayaa ka aamusan, oo leh makhaayado iyo dukaamo qaar laga iibsado wax xiiso leh.
Bartamaha magaalada Glasgow
Bartamaha magaalada waxaan ku arki karnaa goobo xiiso leh, maadaama ay tahay magaalo aan ka helno farshaxan iyo wajiyo qurxoon. Fagaaraha George waa barxad aad u muhiim ah oo leh xusuus dagaal. Wadada Buchanan waxaan ka helnaa wadada ugu ganacsiga badan ka imanaya magaalada, oo leh wadiiqooyin ama dariiqyo xiiso leh iyo bandhigyo farshaxan magaalo. Waxaan sidoo kale booqan karnaa The Lighthouse, oo ah dhisme aad u gaar ah oo ku yaal Mackintosh oo ahaa xarunta wargeys laakiin hadda waa matxaf leh soo galitaan bilaash ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Maxaa lagu arkaa Glasgow
Sawirada arooska, sidee had iyo jeer u muuqdaan kuwo wanaagsan?
Waa maxay fenugreek maxaase loo adeegsadaa?